सोलु काेरिडोर निर्माणमा ढिलाई, २१७ मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्था - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ०६, २०७५ 2637 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
ठेकेदार छनोट विवादले निर्धारित समयभन्दा २ वर्ष ढिलो काम सुरु भएको १३२ केभी सोलु कोरिडोरको निर्माणले गति लिएको छैन । यही कारण त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
अहिले सोलु कोरिडोरमा अहिले २१७.५ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यीमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुको अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइन समयमा तयार नभए प्राधिकरणले ४५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । २३.३ मेगावाटको माथिल्लो सोलुको समस्या पनि उही हो ।
अहिलेसम्म तल्लो सोलु र माथिल्लो सोलुको प्रगति करिब ५० र ८५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । प्रसारण लाइन पूरा नहुँदै आयोजनाको काम पूरा हुने देखिएको छ ।
समयमै काम पूरा नभए प्रसारण लाइनको क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट भराउने चेतावनी
निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र सोलु करिडोरको काम पूरा गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ । सोलुखुम्बुको तिङ्लामा निर्माणाधीन १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको स्थलगत अवलोकन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमै काम पूरा गर्न ताकेता गरे ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई भएकाले सोलु खोलामा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत खेर जाने समस्या देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधन गर्न घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको प्राधिकरणको टोली आयोजनास्थल पुगेको थियो ।
घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण सबैतर्फबाट सुरु गर्न आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदातालाई निर्देशन दिए । ‘प्रसारण लाइनमा पर्ने वनको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जा तथा वन मन्त्रीलाई आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘निर्माण प्रगतिको नियमित अनुगमन हुन्छ, समयमै काम सकिएन भने यसको जिम्मेवारी आयोजना प्रमुख र ठेकेदारले लिनुपर्छ ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकेदार कम्पनी प्रवन्धकलाई चेतावनी दिंदै भन्नु भयो,‘यदि प्रसारण लाइन तथा सव स्टेसन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेर विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएमा प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई तिर्नु पर्ने पेनाल्टी ठेकेदारबाट असुल गर्ने छौं ।’
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०१९ को मार्चसम्म सक्ने लक्ष्य छ । तिङ्ला–ओखलढुंगा–उदयपुर–मिर्चैया (सिराहा) ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ३०३ टार निर्माण गर्नुपर्छ ।
हालसम्म ५० टावरको जग हालिएको छ भने ५ वटा खडा गरिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन प्रसाद गौतमले बताए । ‘सिराहा र उदयपुरबाट काम सुरु गरेका छौं’, उनले भने, ‘मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा छ, यसको समाधान तत्काल गरिदिनुपर्छ ।’
भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीले डिसेम्बर २०१८ भित्र तिङ्लामा सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिले सबस्टेसन निर्माणमा ४२ जना कामदार खटिएका छन् । ठेकेदारले एक हप्ताभित्र कामदार थपी कामलाई तीव्रता दिने दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणले सोलु करिडोर निर्माणमा ढिलाई हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत जोड्न अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था अघि सारेको छ । ओखलढुंगाबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण र तिङ्लामा ३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यसको काम ६ महिनाभित्र पूरा हुँदैछ ।
‘२३.५ मेगावाटको सोलुले डिसेम्बरभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने बताएको थियो, तर स्थलगत काम पूरा हुने अझै एक वर्ष लाग्ने देखियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने, ‘ठेकेदारले सबस्टेसननको काम डिसेम्बर २०१८ भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैले माथिल्लो सोलुको विद्युत जोड्न समस्या हुँदैन ।’
विद्युत गृह तयार भए पनि इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण अझै आयोजनास्थल पुर्याइएको छैन । उपकरण जडानमा समय लाग्ने देखिन्छ । स्वीचयार्ड र करिब ४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाले अझै सुरु गरेको छैन ।
६ महिनाभित्र सोलुमा राष्ट्रिय ग्रिड
प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र सोलुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने बाचा गरेको छ । सोलुमा अहिलेसम्म केन्द्रीय लाइन पुगेको छैन । ६ महिनाभित्र लाइन पुर्याउने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ ।
अहिले ओखलढुंगासम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । प्राधिकरणले ओखलढुंगाबाट सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । सल्लेरी च्याल्सा माइक्रो हाइड्रोले सल्लेरीमा विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ ।